မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရသူ လူနာအသစ် (၁,၁၂၃)ဦး ထပ်တိုး - YTV
Home » Programs » News » မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရသူ လူနာအသစ် (၁,၁၂၃)ဦး ထပ်တိုး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရသူ လူနာအသစ် (၁,၁၂၃)ဦး ထပ်တိုး
News October 15, 2020 9:07 am
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Covid-19ကူးစက်ခံရသူ ၁,၁၂၃ ယောက် ထပ်တိုးတယ်လို့ သိရပါတယ်. အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ည ၈နာရီက ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရသူလူနာ ၁,၁၀၀ ကျော်ထပ်တိုးတာကြောင့် စုစုပေါင်း ၃၀,၄၃၇ ယောက်အထိရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်….
ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း(၁၃,၂၅၈)ခုကို ရန်ကုန် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန၊ ဆေးသုတေသန ဦးစီးမှာ ဌာန၊ မန္တလေး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန ၊ နဲ့ မော်လမြိုင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့အပါအဝင် ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနပေါင်း ၁၁ ခုတို့မှာ စစ်ဆေးခဲ့ကြတာပါ. လက်ရှိချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ဓါတ်ခွဲနမူနာပေါင်း ၄ သိန်း ၄သောင်းကျော်ကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကာ လက်ရှိချိန်မှာ ပိုးတွေ့ရသူပေါင်း ၃၀,၄၃၇ ယောက်အထိ ရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ညပိုင်းထုတ်ပြန်မှုအရ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီး အခြားရောဂါအခံလည်းရှိကာ သေဆုံးသူဦးရေကလည်း နောက်ထပ် ၂၉ ဦး ထပ်တိုးတာကြောင့် စုစုပေါင်း (၆၉၃)ယောက် အထိရှိပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီး (၂)ကြိမ်ဆက် ပိုးမတွေ့ရသူကလည်း (၁၁,၇၆၉)ယောက် အထိရှိပါတယ်. လက်ရှိမှာဆိုရင် ကိုဗစ် ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကို ကိုရီးယားနိုင်ငံက ရောက်လာတဲ့ Test Kitတွေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းက ဆေးရုံကြီးများနှင့် မြို့နယ်များမှာလည်း စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်…..
Daily Show (89)
US Election Ep-4
ဓားလောကရဲ့သူရဲကောင်း အပိုင်း (၁၂)